Dear friends: Sharing New Web Site created by Myanmar Developers
- You can download from megaupload.com for FREE
- You can watch movie online from megavideo.com and youtube for FREE.
- You can see our activities and portfolio which we have done.
- And you can share everything in forum and you can download some useful application.
NOTE: If you have any feedback or suggestion, please feel free to contact us at… Continue
Added by Kyaw Zaw Win on May 30, 2010 at 8:30pm —
The report highlights the key role of ICT as an enabler ofamore economically, environmentally and socially sustainable world… Continue
Added by Naylin Oo on May 24, 2010 at 11:08pm —
Microsoft: The Web Story on 19th Oct 2009
"Microsoft the Web Story" Seminar in Singapore
Singapore; Microsoft explains about its "Window Azure Platform"in 19th October 2009 in Singapore.
The seminar was to help Microsoft developers to develop and run rich, engaging and robust applications on the web and the cloud.
There were two main speakers.…
Added by Wayne on May 24, 2010 at 3:30am —
MyanmarITpro ... (or ) အပြားကမ္ဘာသို့ ခြေလှမ်း ...
ကျွန်တော် မြန်မာအိုင်တီပရိုကို member အနေနဲ့ဝင်လာတာ မကြာသေးပါဘူး ... ကျွန်တော်က ကျွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာသင်တန်းမှ တက်ထားခြင်းမရှိပါဘူး ... အဲဒီတော့ IT Terms တွေနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးပါဘူး ... ဒါပေမယ့် ဒီဆိုက်လေးမှာ ရေးထား၊ မေးထား၊ ဆွေးနွေးထားတာတွေကို လိုက်ဖတ်၊ လိုက်မွှေကြည့်လိုက်တော့ .. မြန်မာပြည်မှာ နည်းပညာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ Crazy ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေ များစွာရှိနေတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိပါတယ် ... ပြီးတော့ တတ်ကျွမ်းနားလည်ကြတဲ့ နည်းပညာသမားတွေ များစွာရှိနေပြီဆိုတာကိုပါ နားလည်သဘောပေါက်လက်ခံလာမိပါသည်။… Continue
Added by KALAYMYOTHAR on May 23, 2010 at 10:00pm —
ဆေးရောင်စုံ ဓာတ်ပုံကို အဖြူအမဲ ပေါင်းစပ်ကြရအောင် -
Photoshop နည်းပညာဖြင့် ဆေးရောင်စုံ ဓာတ်ပုံအတွင်းသို့ အဖြအမဲ ရောစပ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ Color Fragment (PDF) စာတမ်းလေးကို ကလစ်နှိပ်ရယူ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါသည်။
Color Fragment (PDF).pdf… Continue
Added by U AUNG THAN on May 22, 2010 at 8:34pm —
"Expert C# 2005 Business Objects"
.Net ကိုလလေ့ာနတေဲ့ သူတှကေို စာအုပျလေးတဈအုပျနဲ့မိတျဆကျပေးပါမယျ။အဲဒီ့စာအုပျရဲ့ Title ကတော့ "Expert C# 2005 Business Objects" ပါ။ရေးတဲ့ သူကတော့ Rocky Lhotka ဖွဈပါတယျ။
ဒီစာအုပျထဲမှာ Rocky Lhotka ကသူ့ရဲ့ … Continue
Added by Zabudipar on May 16, 2010 at 12:30pm —
No Comments About Creator of JQuery, Processing.js and Sizzle.js
Added by NeoAries on May 16, 2010 at 11:30am —
အကောင်းဆုံး ပညာ၊အကောင်းစုံး ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် IT ပညာရှင်ဖြစ်ရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမည့်အစီအစဉ်သစ်ဆိုတာ
အခုတစ်ကျွန်တော် ကြားလိုက်တာတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာ "အကောင်းဆုံး ပညာ၊အကောင်းစုံး ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် IT ပညာရှင်ဖြစ်ရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမည့်အစီအစဉ်သစ် စတင်လိုက်ပါပြီ" ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ...သင်ကြားမှုပုံစံ တို့ နေထိုင်မှုပုံစံ တို့ အစားအသောက်တို့ အခြားရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ဆိုပြီး ရေးထားလိုက်တာများ လန်ထွက်နေတာပါပဲ ...အဲဒီမှာ IDCS, IADCS, B.Sc(Hons) BIT) တို့ကို တက်လို့ရတယ်တဲ့ဗျာကုန်ကျစရိတ်က ၂၉ သိန်း ပေးရမယ်ဆိုထားပါတယ်… Continue
Added by it approver on May 16, 2010 at 11:26am —
Hi All,Window မှာ Text Editor ကောင်း ကောင်း ကို လိုချင် နေ သူများအတွက် E Text Editor လေး နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရ စေ။ သူက apple က textmate clone ဆို လဲ ပြောလို့ရ ပါ တယ်။ Textmate commands တွေ snippets တွေကို လဲ support လုပ် ပါ တယ်။ programming languages တော် တော် များကိုလဲ support လုပ် ပါတယ်။ themes တွေ က လဲ တော်တော် ကောင်း ပါ တယ်။ ကျွန်တော် အ ကြိုက် ဆုံး theme က တော့ twilight theme ပါ။ ရှင်းရှင်း လေး နဲ့ ဆွဲ ဆောင် မှု ရှိ တယ်။ ပြီးတော့ bundles တွေ auto complete တွေ လဲ ရ ပါ တယ်။ design view… Continue
Added by NeoAries on May 16, 2010 at 11:00am —
အဖြူအမဲ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံကို ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံဖြစ်လာအောင် Photoshop နည်းပညာနဲ့ ဖန်တီးကြရအောင်-
ရှေးက ရိုက်ခဲ့ကြသော အဖြူအမဲ ဓာတ်ပုံများကို Photoshop နည်းပညာဖြင့် စိတ်ကြိုက် ဆေးရောင်သွင်းထည့်နိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ Black to Color Photo (PDF) စာတမ်းလေးကို ကလစ်နှိပ်၍ ရယူပျော်ရွှင်နိုင်ပါသည်။ အမှားများပါလျှင် သည်းခံခွင့်လွှတ်ကြပါရန်။… Continue
Added by U AUNG THAN on May 15, 2010 at 6:56pm —
Flash နဲ့ Window application ရေးသားလို့ရတယ်လို့ သိပြီးတဲ့နောက် မြန်မာလိုပါ ဒေတာသိမ်းလို့ရအောင် ရှာဖွေခဲ့ပါတယ် အခုတော့ အိုကေသွားပါပြီ
Flash ကို web animation တွေအတွက်သာ သုံးနေခဲ့ပြီး တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာက Flash နဲ့ Database တွဲပြီး window application ရေးလို့တာကိုသိလိုက်ရပါတယ် ... ကျွန်တော် အားရပါးရလေ့လာခဲ့ပါတယ် ...ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလဲဆို ... interface အနေနဲ့ကတော့ ပြောစရာဘယ်ရှိတော့မလဲ animation က အပြည့်အ၀ သုံးလို့ရနေတာကို ... data gird တွေဆို click လုပ်လိုက်တိုင်း animation လေးတွေနဲ့ သိပ်ကို ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ..ထူးခြားတာက အသုံးပြုသူရဲ့စက် မှာ ဘာ application မှ ရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုတာလေးပါ… Continue
Added by it approver on May 13, 2010 at 2:30pm —
Certificate၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့် Self-Study
ကျွန်တော် နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ Post နှစ်ခု က ဧပြီလ (၂၅)ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ MZ 3rd Anniversary ပွဲနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်... အခု Article ဟာလည်း အဲဒီ ပွဲနဲ့ပဲ ဆက်စပ်နေပါတယ်... အဲ့ဒီပွဲမှာ တက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေထဲက မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုဟာ လေ့လာနေသူ Beginner များ မေးသင့်တဲ့၊ သိသင့်တဲ့ မေးခွန်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်... အဲ့ဒီ မေးခွန်းတွေကို ကိုရာဗီ၊… Continue
Added by Ei Maung on May 13, 2010 at 1:00pm —
ဆယ်ရေးတစ်ရေး ကိုးရေးတစ်ရာတဲ့ဒီစကားအဓိပ္မါယ်ကဘာလဲ ဆယ်ရေးတုန်းက တရေးဆိုပြီး ကိုးရေးကာမှ ဘာကြောင့်တစ်ရာဖြစ်သွားရတာလဲ တကယ်လို့သာ ရှစ်များရေရင်ဘာလာဦးမှာလဲ မသိဘူး အလကားသောက်အဓိပ္မါယ်မရှိတဲ့ တောက်တီးတောက်တဲ့ စကားေ ဟေ့... မင်းသိလားသိရင်ပြောခဲ့ဦး
လာပြန်ပြီ အီစကလီတဲ့ အဘိဓါန်တွေကတော့ အမျိုးမျိုးဖွင့်ပြနေတာပဲ အဲဒါကရော ဘယ်လောက်ထိ မှန်လဲ ဘယ်သူကစပြောခဲ့တာလဲ အလကား အဒီပ္မါယ်မဲ့စကားတွေ အဲလိုစကားလုံးတွေ မြန်မာစာအဘိဓါန်မှာ ပြည့်နေတာပဲ အဓီကလိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေပဲထည့်ရေးပါလား ခုတော့ဝေါဟာရသာပိုလာပြီး ဘာမှလဲ… Continue
Added by akar phyoe on May 12, 2010 at 7:55pm —
လူကြီးနဲ့ လူငယ် အကြား အဟန့်အတားလေးကတော့ မာနဆိုတဲ့ မာနတ်ရဲ့ သမီးတော်လေးပါ
လူကြီးတွေ အနေနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အံ့မခန်းစွမ်းပကားကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုအပ်သလိုပဲ လူငယ်တွေကလည်း ဒီနေ့ ငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာသာနေတဲ့ နေမင်းကြီးဟာ ငါတို့ရဲ့ ဘိ်ုးဘေးတွေတုန်းကလဲ ဒီလိုပဲသာခဲ့တာပဲဆိုတာကို သတိရပြီး လူကြီးတွေဆီက အတွေးအကြံ အတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာဆည်းပူးကာ ယနေ့ခေတ် ပညာတွေနဲ့ တွဲစပ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်
အမှားလုပ်မိတာတွေဟာ အသစ်အသစ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး လူကြီးတွေလဲဒီအမှားတွေပဲမှားခဲ့သလို… Continue
Added by akar phyoe on May 12, 2010 at 7:51pm —
Do you want an email with yourname@student.com by FOC?
You can get an email with yourname@student.com as likeaGoogle mail that is powered by Google. All of the features are the same with Gmail. Step (1)Firstly go to www.student.com and register your account. After that they will send an activation mail to your primary gmail or email. Notice : when you signing up on there plz check on the " I want to get from yourname@student.com" statement . this page is case… Continue
Added by Ye' Paing Phyo on May 11, 2010 at 9:00pm —
Software Engineering Sommerville 8
Hi All,Sommerville Software Engineering 8 စာအုပ်ပါ။ Software Engineer လုပ် မဲ့
သူ များ နှင့် Software Engineer များအတွက် ဖတ် သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်း
တစ်အုပ်ပါ။ online price က $120.83 နဲ့ amazon မှာ buy လို့ရပါတယ်။
Sommerville Software Engineering9လဲ ထွက် နေ ပါ ပြီ။ online price က
$85.86 နဲ့ amazon မှာ buy လို့ရပါပြီ။ ဒါပေမယ
Sommerville Software Engineering9အ တွက် pdf ebook ရှာမတွေ့သေးပါ။
တွေရင် link ထပ် တင် ပေးပါ မည်။
Added by NeoAries on May 11, 2010 at 3:30pm —
ဆော့ဖ်ဝဲလေးကတော့ အသက် ၃ နှစ်ကနေ ၇ နှစ်အထိ… Continue
Added by manawphyulay on May 9, 2010 at 11:40am —
No Comments ရေတံခွန်အသွယ်သွယ် စီးလို့ရယ်
မူလပုံက ရေတံခွန်ရှုခင်းဓာတ်ပုံပါ။ ပုံအသေတစ်ပုံကို အသက်ဝင်အောင် ဖန်တီးချင်တဲ့သူများအတွက်ပေါ့။ ကျွန်မ ခုလက်ရှိလည်း ပျင်းရင် ဆော့သလို တိမ်လေးတွေ ရေလေးတွေ စီဆင်းနေတာကို မြင်ချင်ရင်လည်း အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးတစ်ခုဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့နော်။ ဘာလေးလဲဆိုတော့ Nufsoft(http://www.nufsoft.com) ဆိုက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုက်လေးမှာ ဒေါင်းပြီး အသက်ဝင်လှုပ်ရှားအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်အရွယ်အစားက 4.45MB သာ ရှိပေမယ့်… Continue
Added by manawphyulay on May 7, 2010 at 9:56am —
No Comments DotA ပြိုင်ပွဲ - ပြိုင်ပွဲဝင် Clan များ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (Amateur Only)
Horizon Computer Network Game Tournament (Amateur)တောင်ဥကလာ ၊
သံသုမာလမ်းပေါ်က Horizon Network Game Canter
မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်က 29-5-2010 ပါ။
စာရင်ပေးသွင်းလိုသော Clan များဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးကတော့
5000 ပါ။First prize 100000 KsSecond prize 70000 KsThird Prize
30000 KsBest Killer Team 15000 KsFastest Victory 50 Hours Member
Card** Pro 1 ယောက်ပါဝင်ခွင့်ပြုပါသည် **Ph - 01-710143… Continue
Added by atrw on May 5, 2010 at 10:00am —